Upstart NooBaa သည်ဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံမရှိသောဒေတာအတွက် Frictionless Storage ကိုထုတ်ဝေသည် NAB သတင်းများ | 2020 NAB Show Media Partner နှင့် NAB Show ၏ထုတ်လုပ်သူဖြစ်သည်။ အသံလွှင့်အင်ဂျင်နီယာသတင်း
ပင်မစာမျက်နှာ » အကြောင်းအရာစီမံခန့်ခွဲရေး » ပျက်ပြင်ဆင်ထားသညဒေတာများအဘို့ Upstart NooBaa စျေး Frictionless သိုလှောင်
ပျက်ပြင်ဆင်ထားသညဒေတာများအဘို့ Upstart NooBaa စျေး Frictionless သိုလှောင်
NooBaa, Incတစ်ခုအစ္စရေးအခြေစိုက် '' frictionless '' သိုလှောင်မှုဆော့ဖ်ဝဲကုမ္ပဏီ, မကြာသေးမီက VMworld 2016 မှာ၎င်း၏တရားဝင်ပွဲဦးထွက်စေတော်မူ၏။ သိုလှောင်မှုနဲ့ networking စစ်ပြန် Yuval Dimnik (CEO ဖြစ်သူ) နှင့် Guy Margalit (CTO) က 2013 ခုနှစ်တွင်စတင်တည်ထောင်ခဲ့ပြီး, ကုမ္ပဏီ (လက်ရှိအစ္စရေးရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများဂျေရုဆလင် Venture အပေါင်းအဖေါ်များမှတဆင့်ငွေကြေးထောက်ပံ့အမျိုးအနွယ်ကိုဖြစ်ပါတယ်www.JVPvc.com) နှင့် Ourcrowd (www.ourcrowd.com) နှင့်ယခုနှစ်နှောင်းပိုင်းစီးရီးတစ်ဦးကရန်ပုံငွေရှာဖွေလျက်ရှိပါသည်။
NooBaa အစောပိုင်း 2017 အတွက်ရရှိနိုင်ပါလိမ့်မည်သည့် software ကိုဖြေရှင်းနည်း, ပျက်ပြင်ဆင်ထားသညအချက်အလက်များကနဦးဆက်ကပ်အပ်နှံထားတဲ့ SDS (Software များ-သတ်မှတ်ထားသောသိုလှောင်မှု) မော်ဒယ်ဖြစ်ပြီး, မည်သည့်အမျိုးအစားသို့မဟုတ် configuration များ၏ Off-the-ကမ်းလွန်ရေတိမ်ပိုင်းဆာဗာများအများအပြားထောင်ပေါင်းများစွာအထိအသုံးချနိုင်သည်ကိုမလုပ်ပဲ နှင့်ပြဋ္ဌာန်းချက်သိုလှောင်မှုစွမ်းရည်၎င်းတို့၏အရင်းအမြစ်များကိုစုပေါင်းပြီး။ ကရှိပြီးသားလုပ်ငန်း datacenter အတွက်စွမ်းရည်အများစုစားသုံးနှင့် Splunk, Hadoop နှင့် IoT (အရာ၏အင်တာနက်) ကဲ့သို့ထွန်းသစ်ပမာဏပြဿနာကိုအရှိန်မြှင့်နေကြသည်ကြောင့်ကုမ္ပဏီပျက်ပြင်ဆင်ထားသညအချက်အလက်ပေါ်စပိုင်းတွင်အာရုံစူးစိုက်တာဖြစ်ပါတယ်ရတဲ့အကြောင်းရင်းဖြစ်ပါတယ်။
NooBaa ပျက်ပြင်ဆင်ထားသညအချက်အလက်များနှင့်ထိုကဲ့သို့သော Splunk နှင့်အထွေထွေ Archive အဖြစ် retention ကို-oriented ပမာဏပစ်မှတ်ထားအတွက်ကုမ္ပဏီအများကြီးရှိပါတယ်။ ဤပမာဏအဘို့မိမိတို့ထုတ်ကုန်တည်နေရာအားရိုးရာသိုလှောင်မှုရောင်းချသူစကေးထွက် NAS (Isilon, ပါဝင်သည် Qumulo) အဖြစ်ကောင်းစွာအဖြစ်အရာဝတ္ထုသိုလှောင်မှု (Cleversafe / IBM က, CEPH, Caringo) ။ NooBaa ကဲ့သို့ပင်ဤအချို့ဒေတာ I / O ဘို့အရာကြွင်းလေ S3-သဟဇာတ API ကိုထောကျပံ့ပေးပေမယ့်ဘယ်သူမျှမသေးသကဲ့သို့, NooBaa စနစ်၏ထူးခြားသောဗိသုကာသို့မဟုတ်စွမ်းရည်ကိုအပ်ပါပြီ။
အသိဥာဏ် node များကဆက်ပြောသည်နှင့်ဆက်လက်အနားပေးသည့်အခါသည် dynamically ဖြန့်ဖြူးညှိ, အရင်းအမြစ်များတစ်ပင်သောင်းပြောင်းထွေလာရောနှောရေကူးကန်အနှံ့သတင်းအချက်အလက်ပျံ့နှံ့ဖို့ NooBaa ရဲ့စွမ်းရည်ကိုကယုံကြည်စိတ်ချရသောဒဏ်ခံနှင့်လုံခြုံဖြစ်ကတိပြုကြောင်းပြဌာန်းချက်သိုလှောင်မှုကိုဆိုလိုသည် ̶ အဘယ်သူမျှမကိစ္စနောက်ခံဟာ့ဒ်ဝဲ၏ပြည်နယ်။
NooBaa ၏ဆော့ဖ်ဝဲကိုသာဖြေရှင်းချက်ဟာ့ဒ်ဝဲ Agnostic သောကွောငျ့, အ datacenter အတွင်းကထဲကနှစ်ဦးစလုံး, ဆာဗာများနှင့် desktops တွေနဲ့၏ကြီးမားသောစီးပွားရေးလုပ်ငန်းရဲ့အများအပြားရာပေါင်းများစွာသို့မဟုတ်ထောင်ပေါင်းများစွာအတွက်သော့ခတ်နိုင်စွမ်း pooling အားဖြင့်ဆော့ဖျဝဲလုပ်နိုင်တဲ့ပြဋ္ဌာန်းချက်သိုလှောင်မှုအကြီးအကျယ် underutilized ပေမယ့်တစ်ဦးဖြစ်ကြောင်းဖြစ်ကြောင်း devices များ° နစ်မြုပ်မြို့တော်စရိတ်။
သူတို့ရဲ့ကြော့ဖြေရှင်းချက်သောင်းပြောင်းထွေလာရောနှော, မိုးတိမ်, ပင် shared ကောင်းကင်ဗိုလ်ခြေအရှင်အပါအဝင်ရှိနိုင်ပါကအခြားကွန်ပျူတာအရင်းအမြစ်ကိုဖြတ်ပြီးလုံခြုံတဲ့သိုလှောင်မှုစနစ်, ဖန်တီးရန်သိုလှောင်မှုစွမ်းရည်စိန်ခေါ်မှုတွေနဲ့ datacenter ခွင့်ပြုပါတယ်။ သောင်းပြောင်းထွေလာရောနှောစွမ်းရည်အရင်းအမြစ်များကိုဖြတ်ပြီးဒေတာများကိုနေရာချထားဤဆောင်းပါး၌နောက်ပိုင်းမှာဆွေးနွေးကြမည်သည့်စက်သင်ယူမှုနည်းပညာများကို အသုံးပြု. ဝတ္ထုထိန်းချုပ်မှုလေယာဉ်ဗိသုကာ, မှတစ်ဆင့် optimized ဖြစ်ပါတယ်။
အနီး-သုည configuration နဲ့အတူသိုလှောင်မှုဟာ့ဒ်ဝဲနှင့်တစ်ဦးပြောဆိုထားသည် 15 မိနစ်ဖြန့်ကျက်အချိန်မရှေ့ပြေးကုန်ကျစရိတ်နှင့်အတူ, NooBaa ရဲ့နှောင့်အယှက်နည်းပညာရှည်လျားသောအများပြည်သူမိုဃ်းတိမ်ကိုဝန်ဆောင်မှုပေးနေဖြင့်ကျင်းပသွားလာရင်း-to-စျေးကွက်အားသာချက်ထားသည်တော်မူကြောင်းကိုဆွဲဆောင်မှု '' တဦးတည်းအဝေးကိုကလစ်နှိပ်ပါ '' တတ်၏။
: NooBaa ရဲ့စကေးထွက်သိုလှောင်မှုဖြေရှင်းချက်ရဲ့တောင်းဆိုမှုများစစ်မှန်တဲ့သက်သေပြလိုလျှင်, မျိုးစုံကြိုးခံစားခှငျ့အပါအဝင် datacenter စောင့်ဆိုင်း
ဒီဖြေရှင်းချက် 15 မိနစ်ဒေါင်းလုပ်ကနေထုတ်လုပ်မှုမှဖြန့်ချထား။
အခြားအအိမ်ရှင်ပမာဏနှင့်အတူကြင်ကစားခြင်း, လူထုကိုကောင်းကင်ဗိုလ်ခြေအရှင်ဖြတ်ပြီး shared အရင်းအမြစ်များကိုအသုံးချနိုင်ပါတယ်။
အလွယ်တကူတစ်ခုတည်းစနစ်အများပြည်သူမိုဃ်းတိမ်သည်, Multi-မိုဃ်းတိမ်သည်ဖြစ်စေ, Multi-WAN ထံမှအရင်းအမြစ်များကိုထည့်သွင်းနိုင်ပါတယ်။
NooBaa ကျုံ့နိုင်သောတစ်ခုတည်းသော Cluster သိုလှောင်မှုဖြေရှင်းချက်ဖြစ်ပါသည်။
အဆိုပါ datacenter အဘို့ဤဆန်းသစ်ဖြေရှင်းချက်၏အောက်ဆုံးလိုင်းသယံဇာတအသုံးချမှုနှင့် purportedly နိမ့်ဆုံး-TCO (ပိုင်ဆိုင်မှုစုစုပေါင်းကုန်ကျစရိတ်) သိုလှောင်မှုဗိသုကာကယ်တင်ကြောင်း topology ပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်တိုးတက်နေကြသည်။ အထူးသ NooBaa ရဲ့ဖြေရှင်းချက်အမြဲရောင်းချသူသော့ခတ်-In ကနေရရှိလာတဲ့ဘဝမှတ်တိုင်သံသရာစက်ဝိုင်းနှင့်အခွင့်အလမ်းကုန်ကျစရိတ်အသေးအဖွဲအလွန်တက်-ရှေ့တွင်အချိန်နှင့်ကုန်ကျစရိတ်များလျှော့ချခြင်း, နိမ့်ဆုံးကုန်ကျစရိတ်ရောင်းချသူနှင့်မီဒီယာကိုသုံးနိုင်သည်။ အိုင်တီကသူတို့ကိုစီးပွားရေးလုပ်ငန်းအသုံးပြုသူများအတွက်ပိုမိုတုံ့ပြန်မှုဖြေရှင်းချက်ကယ်လွှတ်ခြင်းငှါခွင့်ပြုသောကြောင့်အပေါငျးတို့သနေစဉ် datacenter ထိရောက်မှုတိုးတက်အောင်များအတွက်အကြွေးယူပြီး, 'cloud-ပြောင်းကုန်ပြီ' ဖို့ချက်ချင်းတုနျ့ပွနျစီမံအုပ်ချုပ်ဖို့ဒါကအထောက်အကူပြုပါလိမ့်မယ်။
NooBaa ရဲ့ '' အေ့ဟေ '' Moment
NooBaa တည်ထောင်သူမီ, Dimnik, Exanet နှင့် Dell ၏ဝါရင့်, ပထမ-လက်ဖောက်သည်ပုံမှန်ရိုးရာစကေးထွက်သိုလှောင်မှုစနစ်များအကဲဖြတ်သို့မဟုတ်ထုတ်လုပ်မှုဖြစ်စေအကောင်အထည်ဖော်ရန်ပေးဆောင်သောကြီးမားကုန်ကျစရိတ်ကိုမြင်တော်မူ၏။ တင်းကျပ် configurations, ရောင်းချသူသော့ခတ်-အတွက် firmware ကိုမှီခို, ကွန်ယက် sensitive ကများနှင့်ကြာမြင့်စွာသင်ယူမှု-curves အားလုံးပင်ခေတ်သစ် SDS စနစ်များသည်, တစ်ဦးစိတ်ညစ်စရာစီမံကိန်းကိုသို့သိုလှောင်မှုနှင့်၎င်း၏စီမံခန့်ခွဲမှုလွှဲအပ်တော်မူ၏။ Dimnik ရန်, အဖြေသိသာသလိုပဲ; cloud storage ။ , On-ချက်ချင်းထ elastic နှင့်အောက်, ပေးဆောင်-အဖြစ်-you-go နှင့်ဟာ့ဒ်ဝဲများအတွက်စိုးရိမ်စရာ 90% ဖျက်သိမ်းရေး, အခြေခံအဆောက်အအုံများ, networking နှင့် On-ရဝုဏ်နှင့်ဆက်စပ်အပေါငျးတို့သညျအခွားခေါင်းကိုက်: အဆိုပါတိမ်တိုက်မော်ဒယ်ယင်း၏အသုံးပြုသူများသည်အပါအဝင်မြောက်မြားစွာအကျိုးကျေးဇူးများကိုကတိပေးထား သိုလှောင်မှု။ သူကတစ်ဦးအပေါ်-ရဝုဏ်ဖြေရှင်းချက်တွင်ဤသည်မိုဃ်းတိမ်ကဲ့သို့ attribute တွေကယ်နှုတ်တော်မူရန်ဖြစ်နိုင်ခဲ့ကြောင်းသဘောပေါက်လာသောအခါ Dimnik များအတွက် '' အေ့ဟေ '' အခိုက်ဖြစ်ခဲ့သည်။
Dimnik အဆိုအရ NooBaa ရဲ့ SDS ဗိသုကာရည်ရွယ်ချက်ရှိရှိဟာ့ဒ်ဝဲ configurations, စွမ်းဆောင်ရည်ရှေ့နောက်ညီညွတ်မှု, မီဒီယာရွေးချယ်မှုနှင့် Networking န်းကျင်တင်းကျပ်လိုအပ်ချက်များကိုအပေါ်လက်ရှိစနစ်များကို '' မှီခိုရှောင်ကြဉ်။
အဲဒီအစား, NooBaa ရဲ့ချဉ်းကပ်မှုအကောင့်သို့သိုလှောင်မှုစွမ်းရည်စုစုပေါင်းအသုံးချ 20% သို့မဟုတ်လျော့နည်းမှာ running အတူပျမ်းမျှ datacenter အတွက်နေရာတိုင်းလဲလျောင်းသောယူဆချက်ကြာပါသည်။ ၎င်း၏ထုတ်ကုန်ရာပူဇော်သက္ကာရှိသမျှကို datacenter အတွင်းအပြင်နှင့်ပြင်ပတွင်တည်ရှိသောကွဲပြားခြားနားသောလက္ခဏာများနှင့်အတူ, ဆာဗာများနှင့်စက်ကိရိယာများရာပေါင်းများစွာသို့မဟုတ်ထောင်ပေါင်းများစွာဖြတ်ပြီးတသမတ်တည်းစွမ်းဆောင်ရည်, ယုံကြည်စိတ်ချရနှင့်လုံခြုံရေးအာမခံဖို့ရှိသည်လိမ့်မယ်။
NooBaa ရဲ့ထူးခြားတဲ့ချဉ်းကပ်မှုအပေါ်တိုးချဲ့, Dimnik ဒါဟာပုဂ္ဂလိကသည်မိုဃ်းတိမ်ရုံ virtualization အကြောင်းကိုသည်ဟုမထင်ရိုးရဲ့ "မှတ်ချက်ချသည်။ ဒါဟာမသက်ဆိုင်သူတို့က, ကို virtual ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာသို့မဟုတ် containerized င်ရှိမရှိ၏, QoS ကယ်လွှတ်ခြင်းငှါလူထုကိုအရင်းအမြစ်များကိုညှိနှိုင်းအကြောင်းကိုဖြစ်သင့်သည်။ အဘယ်ကြောင့်တစ်ဦး Rasberry Pi အလားအလာလုပ်ငန်းအရင်းအမြစ်မဖြစ်နိုင်သလဲ ဒီစိန်ခေါ်မှုမှကျွန်တော်တို့၏ဖြေရှင်းချက်ကြီးမားတဲ့ orchestration ပြဿနာထက်တစ်ဦးရိုးရာသိုလှောင်မှုချဉ်းကပ်မှုအဖြစ်မြေတပြင်လုံးသိုလှောင်မှုဂေဟစနစ်ကုသတည်ရှိသည်။ ဒါကြောင့်လုပ်နေတာတှငျကြှနျုပျတို့ data တွေကိုနေရာချထားစီမံခန့်ခွဲရန်စက်သင်ယူမှုများကဲ့သို့ကြီးမားသောဒေတာသဘောတရားများကိုအသုံးပြုခြင်းအားဖြင့် network ပေါ်မှာဘယ်နေရာမှာမဆိုတည်ရှိသည်ဆိုစွမ်းရည်အရင်းအမြစ်ကိုထောကျပံ့နိုငျသညျ။ သငျသညျသူတို့အားအသုံးအနှုန်းများအတွက်ပြဿနာချဉ်းကပ်ပြီးတာနဲ့, ထို့နောက်တစ်ဦးလုံးဝအသစ်သောဗိသုကာအထူးသဖြင့်ကြီးမားသောအကျိုးကျေးဇူးများကိုမှဦးဆောင်သည့်ထိန်းချုပ်မှု-system ကိုဒီဇိုင်း၏ဧရိယာထဲမှာပေါ်ထွက်လာ။ "
စိန်ခေါ်မှုများဒါက NooBaa ဖြေရှင်း
အိုင်တီ datacenter အုပ်ချုပ်ရေးမှူးများရင်ဆိုင်ရအဓိကစိန်ခေါ်မှုရိုးရာသိုလှောင်မှုသော့ခတ်-In နှင့်မာကျောမှုမရှိ, ကန့်သတ်ဘတ်ဂျက်အပေါ်ကြီးမားတဲ့ data တွေကို collection များကိုဆက်လက်ထိန်းသိမ်းထားခြင်းနှင့်စကေးဖို့ဘယ်လိုဖြစ်ပါသည်။ နှစ်စဉ်နှစ်တိုင်းစက်မှုလုပ်ငန်းဤပြဿနာပေါ်ကို piling သစ်ကိုလျှောက်လွှာ drivers တွေကိုမြင်သည်။ နောက်ဆုံးတွင်, ဒီကုန်ကျစရိတ်ကိုလျှော့ချတဲ့မေးခွန်းဖြစ်ပါသည်။ မီဒီယာရွေးချယ်မှုနှင့်စာရွက်-သတ္တုအမြဲသင်္ချာအတွက်အရေးပါသော်လည်းတရားရှိဖို့နဲ့သော့ခတ်-In များ၏စရိတ် TCO ညီမျှခြင်းမှဧရာမမျှဝေသူဖြစ်ကြောင်းထွက်လှည့်။ ဤသည် NooBaa ဖြေရှင်းတော်မူကြောင်းကိုကုန်ကျစရိတ်-ငွေစုရှေ့တန်းဖြစ်ပါတယ်။
NooBaa ၏မိုက် Davis က, စျေးကွက်ရှာဖွေရေးအရာရှိချုပ် (CMO), ကုမ္ပဏီရဲ့ '' အသိဉာဏ် '' နည်းပညာကိုလက်ရှိသိုလှောင်မှုစီမံခန့်ခွဲမှုန့်အသတ်အမှာစကားဘယ်လိုရှင်းပြသည်။ Davis ကအဆိုအရ NooBaa အောက်ပါသိုလှောင်မှုနှင့်အခြေခံအဆောက်အအုံစိန်ခေါ်မှုများဖြေရှင်းနိုင်ပါတယ်။
သော့ခတ်-In: သော့ခတ်-အတွက်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းမှအန္တရာယ်ချမှတ်ထားတဲ့။ အိုင်တီရောင်းချသူအကြားစေ့စပ်ညှိနှိုင်းဖို့အပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်ရှိသည်ပါဘူး, နှင့်လမ်းဆင်းထွန်းသစ်နည်းပညာများ၏အားသာချက် ယူ. မသွားနိုင်သည့်အခါ, ထို့နောက်သူတို့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းလိုအပ်ချက်များကိုတုံ့ပြန်နိုင်စွမ်းကိုဆုံးရှုံးအသစ်နည်းပညာများထိရောက်သောကုန်ကျစရိတ်ဖြစ်လာသည့်အခါကျန်ရစ်နှင့်နာကျင်ရင်ဆိုင်ရရ အနာဂတျမှာ forklift အဆင့်မြှင့်။ NooBaa သော့ခတ်-in ကိုဖယ်ရှား။
ဆက်ကပ်အပ်နှံအရင်းအမြစ်များကို: တည်ဆဲဖြေရှင်းချက်သိမ်းဆည်းခြင်း, ထိန်သိမ်း-space ကိုများနှင့်ကွန်ရက်များအတွက်ဆက်ကပ်အပ်နှံအရင်းအမြစ်များကိုလိုအပ်သည်။ သမ္မာတရားကိုအများဆုံးလုပ်ငန်းတွေဆိုးရွားစွာစွမ်းရည်ရှိပြီးသားကောင်းကင်ဗိုလ်ခြေအရှင်အတွက် '' သောင်တင် '' နှင့်အတူ၎င်းတို့၏စွမ်းရည်ရှုခင်းကိုဖြတ်ပြီး underutilized နေကြတယ်ဆိုတာပါပဲ။ NooBaa ပင် NooBaa အခြား application တွေနဲ့အကြိုက်ဖက်ကစားဘယ်မှာ shared ကောင်းကင်ဗိုလ်ခြေအရှင်ပေါ်, ကမ်းနားလမ်းစွမ်းရည်ကိုတွေ့နှင့်အသုံးချ။ အများစုမှာ NooBaa ဖောက်သည်ဖြန့်ကျက်ရှိပြီးသားနှင့်သောင်တင်စွမ်းရည်၏အဲဒီနေရာက Application အားဖြင့်မပြည့်စုံ, တစ်သုည-capex အတွေ့အကြုံကိုကြောင်းရှာပါ။
သိုလှောင်မှုကိုမွေးစားနာကျင်နှင့်စျေးကြီးသည်: ရိုးရာသိုလှောင်မှုသုံးသပ်စိစစ်ခြင်းနှင့်စေလွှတ်ရောင်းချသူထိုကဲ့သို့သောမဖြစ်မနေတပ်ဆင်န်ဆောင်မှုအဖြစ်မှီခို, ရှည်ရှည်ဒီဘာဂင်နှင့်ပေါင်းစည်းမှုများနှင့်ရက်သတ္တပတ်ကြာအကဲဖြတ်စီမံကိန်းများနှင့်အတူခက်ခဲသည်။ NooBaa တစ် 15 မိနစ်-to-ထုတ်လုပ်မှုဒီဇိုင်းရည်မှန်းချက်နှင့်တကွ, ဖောက်သည်အသုံးပြုပုံချက်ချင်းတပ်ဆင်ပြီး။
သိုလှောင်ရေးအခြေခံအဆောက်အအုံစိန်ခေါ်မှုများ: Hybrid ကိုများထားရှိနှင့် WAN ပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်တည်ဆဲသိုလှောင်မှုဖြေရှင်းချက်များအတွက်ကြီးမားသောစိန်ခေါ်မှုများဖြစ်ကြသည်။ NooBaa နှင့်အတူ, မိုဃ်းတိမ်၌တစ်ဦး node ကိုဒေသခံထိန်သိမ်းအတွက် node ကို, ဒါမှမဟုတ်တစ်ဦးဝေးလံခေါင်သီ datacenter အတွက် node ကိုသကဲ့သို့ကောင်းလှ၏။ တစ်ခုချင်းစီကိုကွဲပြားခြားနားသော geolocation နှင့်ဝိသေသလက္ခဏာများရှိပြီး, ဒါပေမယ့် NooBaa ရဲ့အဆင့်မြင့်ထောက်လှမ်းရေးကြောင်းကိုင်တွယ်ရန်ဒီဇိုင်းပြုလုပ်ထားသည်။ ဒါက NooBaa ဖောက်သည်ကိုအလွယ်တကူနှင့်ထင်သာမြင်သာရှိမှုမိုဃ်းတိမ်နှင့်ထံမှမျိုးစုံမိုဃ်းတိမ်ကိုစီးတလွှားနှင့် WAN အရင်းအမြစ်များကိုဖြတ်ပြီးဒေတာရွှေ့နိုင်သောဆိုလိုသည်။
စစ်မှန်သောမျိုးစပ်နည်းပညာ: အခြားအမတူဘဲ statically cache ကို-cloud-ဖို့ဒါမှမဟုတ် DR-To-မိုဃ်းတိမ် NooBaa ပေးဒါခေါ် "ဟိုက်ဘရစ်" ဖြေရှင်းချက်မတရားဖမ်းဆီးမိုဃ်းတိမ်ကို VMs အားနှင့်ရောစပ်, ချုံ့ချဲ့ဘို့ပုဂ္ဂလိကအရင်းအမြစ်များကိုတွဲပြီး cloud storage န်ဆောင်မှုများ, ရွှေ့ပြောင်းအားထုတ်မှု, လျတ်စွမ်းရည်နှင့် DR လောင်နိုင်ပါတယ် ။ ဖောက်သည်များမှာလည်းကုန်ကျစရိတ်ရည်မှန်းချက်များအောင်မြင်ရန်သို့မဟုတ်မိုဃ်းတိမ်ကိုလျှောက်လွှာများထားရှိအတူဒေတာ align မှနေရာချထားမူဝါဒများညှိ, Multi-မိုဃ်းတိမ်ကိုမော်ဒယ်များချမှတ်လိမ့်မည်။
ပျက်ပြင်ဆင်ထားသညဒေတာများအဘို့ optimized: အဆိုပါ NooBaa ဗိသုကာဖိုင်များကို optimized ဖြစ်ပါတယ်။ data-path ကိုဒီဇိုင်း, dedupe စွမ်းရည်, ယာယီသိမ်းဆည်းယုတ္တိဗေဒ, metadata ကိုစနစ်များနှင့်ငြိမ်ဝပ်စွာနေရသော semantic ဖိုင် application များအတွက်ဖမ်းယူနားဆင်နေကြသည်။ Splunk, စီးပွားရေးလုပ်ငန်း Archive များနှင့်မီဒီယာ Archive NooBaa အသုံးပြုမှု-ဖြစ်ပွားမှုအလွန်အစွမ်းထက်တဲ့ဥပမာဖြစ်ကြသည်။ SAN သို့မဟုတ်ဖိုင်စနစ်ကလက်လှမ်းရှာကြံဖောက်သည်အမျိုးမျိုးသော 3rd ပါတီတံခါးပေါက်ဖြေရှင်းချက်အသုံးချနိုင်ပါတယ်။
automated ထောက်လှမ်းရေး: NooBaa ပြီးတော့အသိဥာဏ်တိုက်ရိုက်ဒေတာနေရာချထား, ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရသိုလှောင်မှုအရင်းအမြစ်များကိုခွဲခြားဖို့စက်သင်ယူမှုအသုံးပြုသည်။ NooBaa algorithms ကျယ်စင်း, preemptive ဒေတာ localization အပါအဝင်နည်းလမ်းများမှတဆင့်နှင့်သယံဇာတ attribute တွေနှင့်အတူဒေတာ IO (ခေါ်အပူ-မြေပုံ) align လုပ်ဖို့အားဖြင့်ယုံကြည်စိတ်ချရ, စွမ်းရည်အသုံးချမှုနှင့်စွမ်းဆောင်ရည်များအတွက်ပိုကောင်းအောင်နိုင်ပါတယ်။ ဖောက်သည်ထိုကဲ့သို့သောသစ်ကိုစွမ်းရည်အတွက် configuration သို့မဟုတ် tier မူဝါဒများ၏ setup ကိုနှင့် tuning အဖြစ်ရှုပ်ထွေးအုပ်ချုပ်ရေးတာဝန်များကိုဘို့လိုအပ်ကြောင်းရှင်းလင်းစေပါတယ်တဲ့လွန်ကဲကဲရိုးရှင်းသောအုပ်ချုပ်ရေးအတွေ့အကြုံမှတဆင့်သင်ယူကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရစက်မှအကျိုး။
NooBaa ရဲ့လျှို့ဝှက်ချက် Sauce
မကြာသေးမီကအထိ, datacenter computing နှင့်သိုလှောင်မှုစွမ်းရည်စျေးကြီးဆက်ကပ်အပ်နှံဟာ့ဒ်ဝဲသေတ္တာများနှင့်အတူ '' forklift အဆင့်မြှင့် '၌တိုးချဲ့ခဲ့သည်။ ဤသည်ပါရာဒိုင်းအမေဇုံ, Aliyun, Google, Microsoft, CenturyLink, IBM က AT & T, Rackspace, Verizon ကနှင့်တူသောတူသောမိုဃ်းတိမ်သည်အခြေခံအဆောက်အဦများရောင်းချသူ, သူတို့ကိုကုန်စည်ဟာ့ဒ်ဝဲအပေါ်အကြီးအကျယ်ရန်ခွင့်ပြု̶ virtualized ကွန်ပျူတာစနစ်များနှင့် software-သတ်မှတ်ထားသောသိုလှောင်မှု protocols များဖွံ့ဖြိုးလာသောအခါပြောင်းလဲနှင့်အတူ အတော်လေးတစ်ဦးချင်းစီဆာဗာများအုပ်ချုပ်ရေး automated ။ ဒါဟာဆယ်စုနှစ်များစွာရှိခဲ့ပွီးသကဲ့သို့သို့သော်ပျက်ပြင်ဆင်ထားသညဒေတာအတွက်သိုလှောင်မှုနေဆဲအကြီးအကျယ်သတ်မှတ်ပြဋ္ဌာန်းထားခြင်းဖြစ်ပါသည်။ ဤသည်ပျက်ပြင်ဆင်ထားသညအချက်အလက်များနှင့်အဘယ်ကြောင့်အကောင်းဆုံးလူထုကိုသိုလှောင်မှုအရင်းအမြစ်များကိုအသုံးချဖို့အဘို့အ NooBaa ရဲ့အလားအလာဖြေရှင်းချက်လာရန်အနှစ်အတွင်းက M & E ကိုစက်မှုလုပ်ငန်းသောင်းချီဒေါ်လာဘီလီယံပေါင်းများစွာ၏ကယ်တင်နိုင်၏သေးငယ် datacenters '' ချုံ့ချဲ့စွမ်းရည်များအတွက်အလွန်အရေးပါန့်အသတ်ဖြစ်ပါတယ်။
NooBaa ရဲ့လျှို့ဝှက်ချက် Sauce '' ဆွေးနွေးခြင်းများတွင် CTO ဖြစ်သူ Guy Margalit သိုလှောင် node များထဲက metadata, နေရာချထားထောက်လှမ်းရေးနှင့်စပျစ်သီးပြွတ်စီမံခန့်ခွဲမှုဆိတျကှကိုချိုးဖျက်ဖို့ NooBaa Re-architected သောသိုလှောင်မှုကို stack ကဆက်ပြောသည်။ Margalit သောင်းပြောင်းထွေလာရောနှောသိုလှောင်မှု node များဖြတ်ပြီးဒေတာနေရာချထားထိန်းချုပ်ဖို့စက်သင်ယူမှု algorithms အသုံးပြုတဲ့အလွန်အမင်း-ရရှိနိုင်အလယ်ပိုင်း '' ဦးနှောက် '(အဆိုပါ NooBaa Core) လည်းမရှိ, ကျွန်တော်တို့ရဲ့ NooBaa စနစ်တွင် "ဟုပြောသည်။ ဤရွေ့ကား node များ Das သို့မဟုတ်ပြင်ပသိုလှောင်မှုကို အသုံးပြု. ကွဲပြားခြားနားသော OS ကိုအတူကွဲပြားခြားနားသောမီဒီယာရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာသို့မဟုတ်ကို virtual, ကြီးမားတဲ့သို့မဟုတ်သေးငယ်မြန်ဆန်သို့မဟုတ်နှေးကွေးစေနိုင်ပါတယ်။ NooBaa သာလုံးဝပင်သောင်းပြောင်းထွေလာရောနှောအရင်းအမြစ်များကိုစားသုံးနိုင်ပါသည်, သို့သော်အမှန်တကယ်စွမ်းဆောင်ရည်, စီးပွားရေးနှင့်ယုံကြည်စိတ်ချရမှုအတွက်ပိုကောင်းအောင်သောင်းပြောင်းထွေလာရောနှော၏အားသာချက်ယူပါလိမ့်မယ်။ "အထူးသ Margalit NooBaa အအေးတွန်းဖို့, အရည်အသွေးမြင့်အရင်းအမြစ်များကိုအတူပူ-data တွေကိုကိုက်ညီဖို့စက်သင်ယူမှုအသုံးပြုမှတ်ချက်ပြု တန်ဖိုးနည်းအရင်းအမြစ်များကိုမှဒေတာများနှင့်အကောင်းဆုံးလျှောက်လွှာစွမ်းဆောင်ရည်အတွက်ဒေတာ geolocation ပိုကောင်းအောင်။ ထို့အပြင် NooBaa Core တက်ကြွစွာ, အရင်းအမြစ်လုံခြုံရေးနှင့်ယုံကြည်မှုစီမံခန့်ခွဲအကြောင်းအရာ-သတ်သတ်မှတ်မှတ်ပိုမိုကောင်းမွန်ရေးထောက်ခံပါတယ်, တိုးချဲ့ metadata ကိုစီမံခန့်ခွဲခြင်း, ကြွယ်ဝစီမံခန့်ခွဲမှု interface ကိုပေးပါသည်။
အစဉ်အဆက်ကိုတီထွင်အရှိဆုံးခေတ်ရဲ့သွက်လက်တဲ့, နိမ့်ဆုံးကုန်ကျစရိတ်ဗိသုကာဖြစ် NooBaa ရဲ့ပြောဆိုချက်ကိုသို့ပိုမိုနက်ရှိုင်းရှာဖွေနေ, Margalit ကျနော်တို့ဖောက်သည်သုညရှေ့ပြေးစရိတ်နှင့်အတူကျွန်တော်တို့ကိုအသုံးချနိုင်သောမသာလို့ပြောပါ "ဆက်လက်ပေမယ် NooBaa သည်အခြား SDS ဗိသုကာများကချမှတ်အများအပြားအုပ်ချုပ်ရေးနှင့် opex ကုန်ကျစရိတ်ဖယ်ရှားဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ နှင့်ဖောက်သည်သူတို့ပြီးသားများအတွက်ပေးဆောင်င့်ကြောင်းစွမ်းရည်အရင်းအမြစ်များကိုမူတည်ပြီးမှခွင့်ပြုပါတယ်။ "
ကို virtual သို့မဟုတ်ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာ, တစ်ဦးသိုလှောင်မှု node ကိုအဖြစ်မဆို Linux ကိုသို့မဟုတ် Windows အိမ်ရှင်စုဆောင်းလေ့ကျင့်။
တည်ဆဲကောင်းကင်ဗိုလ်ခြေအရှင် (ဥပမာ underutilized Hadoop ပြွတ်, ESX ကောင်းကင်ဗိုလ်ခြေအရှင်, etc) အတွက်ကမ်းနားလမ်းစွမ်းရည်မြှနိုငျသညျ။
အလိုအလျောက် DR (ဘေးအန္တရာယ်ပြန်လည်ထူထောင်ရေး), စက်သင်ယူမှုအပေါ်အခြေခံပြီး tier, balancing နှင့် tuning ။
အသုံးပြုခြင်း VMware ESX အိမ်ရှင်အဖြစ်လက်ခံကျင်းပပေးရန် NooBaa core ကိုထိန်းချုပ်-လေယာဉ်များနှင့်ဒေတာများတစ်ဦးမှတဆင့်ဝင်ရောက်နေသည် အမေဇုံ S3 သဟဇာတ interface ကို။
ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ deduplication, compression, စာရင်းစစ်များနှင့် encryption ကိုအစဉ်အမြဲ-အပေါ်ဖြစ်ကြသည်။ ဖျက်နိုင်တဲ့ coding အဆိုပါလမ်းပြမြေပုံအပေါ်လည်းဖြစ်ပါတယ်။
node များစုပေါင်းပြီးမှနိုင်စွမ်းနှုန်း-ပုံး DR မူဝါဒများအကောင်အထည်ဖော်ရန်။
ဒေတာအကွဲကွဲအပြားပြားနဲ့ redundancy မှတဆင့်မြင့်မားယုံကြည်စိတ်ချရသော။
မြင့်မား၏အရွယ်မှာပြွတ်နှင့်မြင့်မားသော throughput စွမ်းဆောင်ရည်နိုင်စွမ်း။
အန္တရာယ်ရှိတဲ့လှုပ်ရှားမှုကို detect ။
ဒေတာ-လမ်းကြောင်းနှင့်ကြွင်းသောအရာမှာ (AES-256) ၏ encryption ။
Unlimited WAN နေရာချထားရွေးချယ်မှုများ။
Davis ကအဆိုအရကုမ္ပဏီတိုက်ရိုက်နှင့်ချန်နယ်ရောင်းအားမှတဆင့်ဖောက်သည်ထောက်ခံပါတယ်။ စိတ်ဝင်စားဖောက်သည်ထံမှတိုက်ရိုက်ထုတ်ကုန်ပစ္စည်းဒေါင်းလုဒ်ဆွဲနိုင်ပါသည် www.noobaa.com တိုက်ရိုက်ရောင်းချမှုမှတဆင့်သွားစရာမလိုဘဲ။ အဆိုပါကုမ္ပဏီ၏ ရပ်ရွာ Edition ကို download လုပ်ပြီး install လုပ်ဖို့အခမဲ့ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါဟာန့်အသတ်ပြင်ဆင်ထားခြင်းစွမ်းရည်နှင့်သိုလှောင်ထားသောဖိုင်များကို 20TB ဦးရေအများဆုံးထောက်ခံပါတယ်။
လောလောဆယ်သူတို့ရဲ့အဆိုပြုလုပ်ငန်းစျေးနှုန်းဖွဲ့စည်းပုံထဲမှာသိမ်းထားတဲ့ယုတ္တိဒေတာအပေါ်အခြေခံပြီးအကြောင်းကို $ 15 / တီဘီ / လ, (စွမ်းရည်ပြင်ဆင်ထားခြင်းမဟုတ်) ဖြစ်လိမ့်မည်။ "ဒါကအမေဇုံ S3 ကဲ့သို့တူညီသောမော်ဒယ်, ဒါပေမယ့်ထက်ဝက်ခန့်စျေးနှုန်းဖြစ်ပြီး, IO စွဲချက်မပါဝင်ပါဘူး။ သို့သော်ငါတို့သည်လည်းတချို့ဖောက်သည်တစ်ဦးရိုးရာလိုင်စင်များအတွက်ဦးစားပေးဖော်ပြကြလိမ့်မည်ကိုသိ, ဒါငါတို့ကဲ့သို့ကောင်းစွာကြောင်းလိုက်လျောညီထွေနိုင်ပါလိမ့်မယ်, "Davis ကဖော်ပြခဲ့သည်။
; နှောင်းပိုင်းဖရန့် Zappa ကအကောင်းဆုံး, "ပြောင်းလဲခြင်းသာလိုအပ်သောကပြောပါတယ် ဒါကြောင့်မလွှဲမရှောင်ပါတယ်။ "ဒီအိုင်တီရှုခင်းတိုင်းပြောင်းလဲနေတဲ့နှင့် NooBaa တူသောစတင်-ups စတင်ခြင်းဘယ်လို M & E လုပ်ငန်းနယ်ပယ်ကတစတစတိုးတက်ပြောင်းလဲလာကိုထောက်ပံ့သောစျေးသည်တစ်ဦးသိသိသာသာသက်ရောက်မှုရှိပါလိမ့်မယ်။ IDC မှ, Forrester နှင့်ဘားရွှေအဆိုအရအချို့သောဖွယ်ရှိအခြေအနေတွေဖြစ်လိမ့်မည်: 1) မနက်ဖြန်ရဲ့ဖြေရှင်းချက်အပေါ်မကယ်မနှုတ်မအမွေအနှစ်ရောင်းချသူစီးပွားရေးလုပ်ငန်းထဲကဖြစ်လိမ့်မည်သို့မဟုတ် / လာမည့်ငါးနှစ်အတွင်းဝယ်ယူပေါင်းစည်း; 2) ဗိုလ်မှူးမိုဃ်းတိမ်ကိုဝန်ဆောင်မှုပေး (6 - 8) အသုံးပြုသူများခေါင်းဆောင်များအပေါ်စံအဖြစ်အခြေအနေမျိုးကျော်တိုက်ခိုက်နေကျန်ရှိနေသေးသောပံ့ပိုးပေးသဖြင့်, စိုးမိုးဆက်လက်တော်မူမည် 3) နဲ့ Big ဒေတာလုပ်ငန်းအိုင်တီများအတွက်အရေးပါသောဧရိယာဖြစ်လိမ့်မည် 4) Enterprises software ကိုကုမ္ပဏီများမှသို့လှည့်နှင့် IT လမ်းကိုဦးဆောင်ကြလိမ့်မည် နောက်ဆုံး, 5) Developers '' အိုင်တီလုပ်ငန်း '' အကြားကွာခြားချက်အဖြစ်ပူဝယ်လိုအားအတွက်ဖြစ်လိမ့်မည် '' နည်းပညာကိုရောင်းချသူ '' နှစ်ဦးစလုံးဟာသူတို့ရဲ့ကုမ္ပဏီ၏ကန့်သတ်ရေကူးကန်များအတွက်အပြင်းအထန̶်တစ်ခုချင်းစီကိုလည်ပတ်ပုံကို၏အခြေခံဖွဲ့စည်းကြောင်းနည်းပညာဖြေရှင်းချက်အကောင်အထည်ဖော်ရန်ရှာအံ့သောငှါအဖြစ်မှုန်ဝါးပါလိမ့်မယ် လာမယ့်မျိုးဆက်အခွက်တဆယ်။ 2017 အသုံးပြုပုံအဖွဲ့အစည်းများ '' အိုင်တီအသုံးစရိတ်၏ကျော် 50 ရာခိုင်နှုန်းကို3အားဖြင့် 60 ရာခိုငျနှုနျးကျြောမှမြင့်တက်, 2020rd ပလက်ဖောင်းနည်းပညာများ, ဖြေရှင်းချက်များ, န်ဆောင်မှုများအတွက်ဖြစ်လိမ့်မည်။
ဤအဟောကိန်းများအတိတ်ဆီသို့လာလြှငျ, ပြီးသားစက်မှုလုပ်ငန်းစုစည်းပြီးနှင့်နည်းပညာ Overload ကနေတည်ငြိမ်မှုခံစားနေရသောလူစုများကြားအဖွဲ့အစည်းများ, သူတို့ရဲ့ datacenter နှင့်၎င်း၏ဆက်စပ် capex နှင့် opex ကုန်ကျစရိတ်အတွက်ဟာ့ဒ်ဝဲလွတ်လပ်ရေးလျှော့ချဆီသို့ကြည့်ရှုမည်။ ဤအနာဂတျတှငျ, NooBaa တူသောဆန်းသစ်ကုမ္ပဏီများမှကျနော်တို့သိုလှောင်မှုစီမံခန့်ခွဲရပါမည်ထင်မည်သို့အသစ်တစ်ခုပါရာဒိုင်းနှင့်အခြေခံစံနှုန်းကိုသတ်မှတ်ကူညီနိုင်လိမ့်မည်ဟုရှေ့ဆောင်ပေးရန်ဖြစ်လာပါလိမ့်မယ်။
CEO ဖြစ်သူ Dimnik ကောက်ချက်ချသကဲ့သို့ "ကျနော်တို့ရိုးရာသိုလှောင်မှုစက်မှုလုပ်ငန်းအပေါ်နာကျင်မှုတွေအများကြီးစီရင်ချင်ပါတယ်။ "
ငါကပိုသဘောတူ NooBaa နှင့်၎င်းတို့၏နည်းပညာမှာပိုမိုနီးကပ်စွာကြည့်ယူပြီးအကြံပြုနိုင်ဘူး။
Editor ကိုပံ့ပိုး at ထုတ်လွှင့် Beat နှင့် AV စနစ်ဘိမဂ္ဂဇင်း
California Polytechnic State University (Cal Poly) မှ San Luis Obispo ဘွဲ့ရရှိခဲ့သည်။ Mr. Chan သည်သူ၏ ၁၃ နှစ်မြောက် Fullerton College Foundation ၏ဒုတိယဥက္ကPresident္ဌနှင့် ၂၀၁၇ ခုနှစ်စီးပွားရေးတွင်ထူးချွန်သော ၀ န်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းအတွက်သမ္မတ၏ဆုကိုရရှိခဲ့သည်။ ၁၈ နှစ်မြောက်ကယ်လီဖိုးနီးယားပြည်နယ်တက္ကသိုလ် Fullerton နှင့်အသေးစားစီးပွားရေးအင်စတီကျု၏စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်တစ် ဦး ၏နေထိုင်ခွင့်နှင့်လမ်းညွှန်အဖြစ်။ ထို့အပြင်သူသည် DECA (Delta Epsilon Chi နှင့် America ၏ Distributive Education Clubs) မှစေတနာ့ ၀ န်ထမ်းတစ် ဦး ဖြစ်သည်။ အင်ဂျင်နီယာကောလိပ်၏ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာစွန့်ပစ်ပစ္စည်းသုတေသနအင်စတီကျုနှင့်ဆန်းသစ်တီထွင်မှုနှင့်စီးပွားရေးစွမ်းဆောင်မှုဆိုင်ရာစင်တာ၊ Cal Poly၊ San Luis Obispo နှင့်သမ္မတ၏အစိမ်းရောင်နှင့်ရွှေလူ့အဖွဲ့အစည်းမှအကြံပေးတစ် ဦး ဖြစ်သည်။ နာတာရှည်ဆေးရုံစောင့်ရှောက်မှုနှင့်စပ်လျဉ်း။ သူသည် Healing Hearts Association အတွက်ဘုတ်အဖွဲ့ဥက္ကPresident္ဌဖြစ်ခဲ့သည်; နှင့်နိုင်ငံတစ်ဝှမ်းရှိ MBA နှင့်ပါရဂူဘွဲ့များသင်ကြားပို့ချမှုများတွင်ပုံမှန်ပါဝင်သောဟောပြောသူတစ် ဦး ဖြစ်သည်။ သူသည်ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းရှိစာတမ်းပေါင်း ၃၀ ကျော်ကိုတင်ပြခဲ့ပြီးပုံနှိပ်ထုတ်ဝေခဲ့သည်။ စာအုပ်ပူးတွဲရေးသားသူ၊ ရုပ်မြင်သံကြားနှင့်ရုပ်မြင်သံကြားအင်ဂျင်နီယာအသင်း၏အယ်ဒီတာ့အာဘော်အဖွဲ့ဝင်၊ ယခင်အသံလွှင့် Beat မဂ္ဂဇင်းအကြီးတန်းအယ်ဒီတာနှင့်ကွန်ပျူတာနည်းပညာပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်းဆိုင်ရာအကြီးတန်းအယ်ဒီတာ၊ နှစ်ပေါင်း ၃၀ ကျော်အတွင်းအမေရိကန်နှင့်အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာကုန်သွယ်ရေးဆိုင်ရာစာစောင်များကိုပုံမှန်တင်ဆက်သူတည်းဖြတ်သူဖြစ်သည်။
www.cognitiveimpact.com မှာသိမှုသက်ရောက်မှုန်ဆောင်မှုများရှုမြင်ကြသည်။ Curtis မှာရောက်ရှိနိုင်ပါတယ် [အီးမေးလျ protected]; ရုံး: (714) 447-4993
ယူ (၁) သည် Xytech ၏ MediaPulse ဖြင့်အရင်းအမြစ်အစီအစဉ်ဆွဲခြင်းကိုတိုးတက်စေသည် - သြဂုတ်လ 6, 2020
ကော်ပိုရေးရှင်းနှင့်ပညာရေးခေါင်းဆောင်များသည် COVID-19 ၏ Discovery Education မှပြုလုပ်သော Virtual Convening တွင်ပညာရေးအပေါ်သက်ရောက်မှုကိုဆွေးနွေးရန် - ဧပြီလ 6, 2020
VDX.tv သည် COVID-19 အကြောင်းလူထုကိုအသိပေးရန်ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာဒီဂျစ်တယ်ဗီဒီယို PSA Initiative ကိုစတင်ခဲ့သည် - ဧပြီလ 2, 2020
CES2017 Cloud သိုလှောင်မှု datacenter စီးပွားရေးလုပ်ငန်း ပေါင်းစည်းမှု M & E NooBaa SoftAtHome, MStar, CES2017 သိုလှောင်ခြင်း ပျက်ပြင်ဆင်ထားသညဒေတာ 2016-10-10
ယခင်: QA သို့အထူးကု, NBCOTS
သိုလှောင်ခြင်း - ရုပ်သံလွှင့်သူများနှင့်အကြောင်းအရာဖန်တီးသူများအားစွမ်းဆောင်ရည်ရှိသောအရေးပါသောမဟာမိတ်
NAB: ဒါဟာအားလုံး Started ဘယ်လို ...